Etu esi ebufe faịlụ n'etiti ekwentị iphone ma ọ bụ ngwaọrụ gam akporo | Akụkọ akụrụngwa
Paco L Gutierrez | | android, Apple, Nkuzi
Ọ bụrụ na ị maara Iphone ị ga-amarakwa AirDrop, nwa afọ usoro ịkọrọ ụdị nile nke faịlụ n'etiti apple ngwaọrụ-ejighi eririỌ bụ ezie na usoro a anaghị arụ ọrụ ma ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ ịkekọrịta faịlụ na Windows PC, mbadamba ma ọ bụ gam akporo Smartphone, inwe ụzọ ndị ọzọ dịka email ma ọ bụ bulite ọdịnaya ahụ na igwe ojii wee budata ya na ikpo okwu anyị ọzọ.
Enwere uzo ozo enweghi oke akpo Snapdrop na ọ dakọtara na ngwaọrụ ọ bụla nwere ihe nchọgharị intaneti na njikọ Wi-Fi, ebe a ka anyị kọwara otu esi eme ya site na nkwụsị.
E nwere ụzọ dịgasị iche iche na ụzọ iji bulite ma ọ bụ kesaa faịlụ na ịntanetị, ụfọdụ n'ime ha bụ ọrụ igwe ojii dị ka Microsoft's Onedrive, Google's Drive, Dropbox ma ọ bụ nke Amazon ma ọ bụrụ na ị bụ onye isi nke usoro ya ma ọ bụ ụzọ dị ka Telegram ma ọ bụ WhatsApp. Ọ bụrụ na ị nwere iPhone, ihe dị mfe karịa na AirDrop, a proprietary technology si Apple na nke na-ebufe faịlụ eriri n'etiti Apple ngwaọrụ. Echiche bụ izipu faịlụ site na iji otu njikọ ikuku, ka faịlụ ndị a ghara ịgafe na butntanetị ma gaa site na ngwaọrụ gaa na ngwaọrụ site na rawụta.
AirDrop aghọwo otu n'ime ngwa ndị kachasị ewu ewu n'etiti ndị ọrụ apụl. Ọ bụrụ na ịgbanweela gam akporo ma ọ bụ chọọ ọzọ Na gam akporo dị jụụ, enwere nomi e mepụtara iji mee ka ndụ dịrị anyị mfe n'agbanyeghị ọkwa ma ọ bụ ngwaọrụ anyị nwere, yana n'ụzọ a anyị nwere ike nyefee faịlụ anyị karịa obere oge. Ọ bụ ihe Snapdrop a free online ọrụ na-adịghị achọ ka echichi ọ bụla.
1 Dị Mfe, Free na enweghị ụdị ndebanye ọ bụla
1.1 Snapdrop data
1.2 Nyefee Faịlị
Dị Mfe, Free na enweghị ụdị ndebanye ọ bụla
Site n'ike mmụọ nsọ nke Apple Airdrop Snapdrop na-eji ọtụtụ teknụzụ maara nke ọma iji mezuo nzube a: HTML5, ES6, CSS3, WebRTC, Web Sockets, na NodeJS (HTML na CSS bụ teknụzụ nke ibe weebụ dị ugbu a). Ọrụ a na-agba ọsọ site na ihe nchọgharị weebụ anyị, dakọtara na ihe ọ bụla nchọgharị ọ bụla, ma desktọọpụ (Windows, Mac, Linux) na ngwaọrụ mkpanaka (Android, iOS).
Site na ndabara ọ na-eji WebRTC maka ịkekọrịta faịlụ, na ihe nchọgharị na-akwadoghị dịka Safari ma ọ bụ Internet Explorer, jiri Ntanetị weebụ.
Ọrụ nke Snapdrop Ọ dị mfe, anyị na-emeghe ihe nchọgharị weebụ na ngwaọrụ abụọ anyị ga-eji, otu iziga na otu ịnata, ọrụ ahụ bụ otu na ụzọ abụọ.
Ekwesịrị ijikọ ngwaọrụ abụọ na otu njikọ Wi-FiYa mere, anyị ga-ahụ na ihe nchọgharị ọ bụla na ngwaọrụ ọzọ nwere aha sistemụ arụmọrụ na ihe nchọgharị. Anyị kwesịrị họrọ ngwaọrụ ahụ ma họrọ faịlụ nke izipu: akwụkwọ, vidiyo, ihe ọdịyo, onyonyo ... Ihe ichoro na oke i choro.
Na mgbakwunye na izipu na ịnweta faịlụ, Snapdrop na-emekwa ka ọ dị mfe izipu ma nata ozi. Ọ bụghị ezigbo ọrụ na-eche na ọrụ a na-agba mbọ ịkekọrịta na ngwaọrụ ndị dị nso. Mana nhọrọ dị, anyị ga-pịa ma jide na ngwaọrụ ọzọ ma ọ ga - ahapụ anyị izipu ozi dị mkpirikpi.
Ngbanye nke nnyefe a ga-adabere na nso nke ngwaọrụ ahụ na rawụta na bandwit nke ejiri ya, Snapdrop bụ n'efu, enweghị ndebanye achọrọ, anaghị echekwa faịlụ na sava ọ bụla, ngwa a ezoro ezo ma enweghị ikike ịgba ma ọ bụ nha nke faịlụ ejiri. N'uche m, ọ bụ usoro kwụsiri ike na ịnweta, ọbụlagodi karịa ọtụtụ ngwa a raara nye iji ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nkuzi » Nyefe faịlụ n'etiti iPhone na gam akporo dị mfe na SnapDrop
Ngwa kachasị mma maka Windows
Huawei mepere ụlọ ahịa ọhụrụ na Madrid, anyị na-egosi gị ya